Otu esi ahụ batrị nke AirPods | Nzukọ mkpanaka
Edere Ferreno | 04/10/2021 13:31 | Mac, Sistemụ arụmọrụ
AirPods bụ otu n'ime ekweisi kachasị ewu ewu na ahịa. Ọ bụghị naanị ndị ọrụ nwere ekwentị Apple na -eji ha, mana obi abụọ adịghị ya na ha na -enweta ngwaọrụ kachasị na ngwaọrụ Cupertino. Ọ bụrụ na ị na -eji ekweisi ikuku ndị a, enwere ike ịnwe oge ịchọrọ ịma ọkwa batrị gị, mara ole batrị ị ka nwere ka ị nwee ike ịga n'ihu na -eji ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata ka ọ ga -esi kwe omume ịhụ batrị nke AirPods, anyị na -egosi gị ụzọ ọ ga -esi kwe omume ime nke a. N'ụzọ dị otu a, ị ga -eburu n'uche pasent batrị nke dị na ekweisi ikuku ndị a. Ọ bụ ụzọ dị mma ịkwadebe maka ihe ndị a na -atụghị anya ya, na -ama mgbe niile ogologo oge ị ga -enwe ike iji ha.
1 Etu ị ga -esi hụ ọkwa batrị nke AirPods gị
1.1 Na ngwaọrụ iOS
1.2 Na mac
2 Ìhè ọnọdụ na ikpe AirPods
3 Ịma Ọkwa na iPhone
4 Nchaji AirPods
4.1 Kachasị loading
Etu ị ga -esi hụ ọkwa batrị nke AirPods gị
Apple na -enye anyị ohere ịhụ ọkwa batrị nke AirPods gị na ngwaọrụ dị iche iche n'ụzọ dị mfe. Ọ ga -ekwe omume na iPhone, iPad, Mac ma ọ bụ ọbụna iPod Touch. Dịka, ọtụtụ ndị ọrụ na -eji ekweisi ikuku ndị a na iPhone ha, yabụ ha ga -enwe ike ịhụ pasent batrị ahụ na ekwentị n'oge niile. Enwere ụzọ abụọ anyị nwere ike isi mee nke a ka anyị wee pụọ.
Na ngwaọrụ iOS
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ pasent batrị nke AirPods gị site na iPhone, enwere ụzọ abụọ iji mee ya. Apple na -enye ụdị abụọ a na nke ị ga -eji bụ ihe ga -adabere na mmasị nke ọ bụla, n'ihi na ha abụọ dị mfe. Ndị a bụ nhọrọ abụọ enyere anyị na ngwaọrụ iOS dịka iPhone:
Mepee mkpuchi okwu nke ekweisi gị n'ime ha n'ime akpa. Mgbe ahụ tinye okwu dị n'akụkụ iPhone gị wee chere sekọnd ole na ole ka pasent batrị pụta na ihuenyo. E gosiputara ma batrị batrị nke ekweisi na nke chaja n'onwe ya.
Jiri wijetị batrị na iPhone gị. Ekwentị ika ahụ nwere wijetị a nke na -enye gị ohere ịhụ ọkwa nchaji nke ngwaọrụ gị, dị ka AirPods gị na nke a. A ga -egosi pasent batrị nke ekweisi n'ime ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụkwa pasent batrị nke akpa chaja, ị ga -enwerịrị opekata mpe otu ntị n'ime akpa ahụ.
Apple na -enyekwa anyị ohere ịhụ pasent batrị nke AirPods site na Mac, nhọrọ ọzọ dị mma nke ukwuu, dịka ị nwere ike iche. Usoro dị n'okwu a dị iche na nke anyị soro na ngwaọrụ iOS dịka iPhone, mana ọ bụghị ihe mgbagwoju anya. N'ime usoro ole na ole, anyị nwere ike ịhụ pasent nke batrị anyị ka nwere na ụdị nke ekweisi ikuku ndị a. Ndị a bụ usoro:
Mepee mkpuchi ma ọ bụ wepu AirPods na akpa chaja ha.
Pịa na akara ngosi Bluetooth
na menu mmanya na Mac gị.
Hover n'elu AirPods na akpa chaja na menu.
Egosiputara pasent batrị na ihuenyo.
Ìhè ọnọdụ na ikpe AirPods
Ihe ọzọ na -egosi na anyị nwere ike iji na nke a bụ ọkụ ọkwa na akpa ekweisi. Ọ bụrụ na AirPods dị n'ime akpa ahụ wee mepee mkpuchi, anyị nwere ike ịhụ na enwere ọkụ ga -egosi ọkwa ụgwọ ha. Ọ bụrụ na ekweisi anaghị adị na ya, ọkụ dị ebe ahụ na -egosi naanị ọkwa chaja n'onwe ya. Yabụ na anyị nwere ike ịhụ ọkwa batrị nke ha abụọ na -enweghị nnukwu nsogbu oge niile.
Ọkụ na -acha akwụkwọ ndụ na okwu abụọ a Ọ ga -egosi na ụgwọ chajị ezuola, ka anyị ghara inwe oke nchegbu gbasara pasent batrị. Nhọrọ ọzọ anyị nwere bụ ka ọkụ ahụ bụrụ oroma, ebe ọ na -agwa anyị na e nwere ihe na -erughị ụgwọ zuru ezu, ma ọ bụ na ekweisi ma ọ bụ n'okwu a na -ekwu. Ọ naghị enye anyị ọnụọgụ batrị kpọmkwem, dịka a na -ahụ ya na iPhone ma ọ bụ Mac, mana ọ bụ ezigbo sistemụ ọzọ.
Iji ọkụ ọkwa na ikpe na -enye anyị ohere ịhụ mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị nwere ụgwọ zuru oke ma ọ bụ ihe na -erughị otu. Ọ bụ opekata mpe ọnọdụ batrị AirPod anyị, nke bụ ihe masịrị anyị na nke a. Dịkarịa ala, anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na batrị ka nwere ike iji ha nwa oge. Ọ bụrụ na ị na -enwe obi abụọ ebe ị nwere ike ịhụ ọkwa ọnọdụ ahụ, na foto dị n'elu, ọ ga -ekwe omume ịhụ ebe abụọ ebe egosiri ya. N'ụzọ dị otú a, ị ga -amaworị ebe ị ga -achọ ọkụ ahụ n'ihe gbasara ekweisi gị.
Ịma Ọkwa na iPhone
Ihe ọtụtụ ndị ọrụ AirPods maralarị bụ na mgbe batrị dị ala, ị nweta ọkwa na iPhone gị na ị jikọtara na ekweisi. Apple na -ewepụta ọkwa dị iche iche, na -abụkarị mgbe ị nwere batrị 20%, ụgwọ 10%, ma ọ bụ 5% ma ọ bụ ihe na -erughị atọ fọdụrụ. A ga -egosipụta ọkwa a na ihuenyo ekwentị, ka ị wee mara mgbe niile na ị ga -etinye ha ụgwọ n'oge adịghị anya.
Ọzọkwa, a na -anụkarị ụda na ekweisi n'onwe ha, nke bụ ihe na -egosi na pasent batrị dị ala n'oge ahụ. Enwere ike ịnụ ụda a n'otu ekweisi ma ọ bụ abụọ, nke a dabere n'ihe ị na -eme n'oge ahụ. A na -eme ọtụtụ ụda, otu nwere batrị 20%, onye ọzọ nwere batrị 10% na nke atọ mgbe ekweisi ga -agbanyụ, n'ihi na ha enweghịzi batrị. Yabụ na a na -adọkarị anyị aka na ntị na nke a ga -eme.
Amụma a bụ ihe ngosi doro anya na ọnọdụ batrị nke AirPods. Ma ọ bụ na ngosi dị na enyo ma ọ bụ ụda ndị a nwere ike ịnụ, anyị maara na batrị ahụ na -agwụ ike, yabụ anyị ga -ebu ha ụgwọ ozugbo enwere ike. Ọ dị mma ka etinyere ọkwa ndị a na ekwentị, n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mfe iji hụ ma anyị nwere batrị dị ala ma ọ bụ na anyị enweghị.
A ga -ana AirPods ebubo oge ọ bụla n'ọnọdụ ha. Ọ bụrụ na ị nwere obere batrị n'otu oge, naanị ihe ị ga -eme bụ idobe ekweisi gị n'okwu ekwuru, ka ebubo ha. Okwu chaja na -enyekarị ụgwọ zuru oke maka ekweisi, yabụ na anyị ekwesịghị ichegbubiga onwe anyị ókè banyere ya. Agbanyeghị na site n'oge ruo n'oge, anyị ga -akwụkwa ụgwọ chaja a.
Ikpe a na -akwado ụdị chaja abụọ. N'otu aka ahụ, ọ ga -ekwe omume ịkwụ ụgwọ ya site na iji chaja ikuku Qi, dị ka iji ihe nkwụnye ụgwọ Qi, dịka ọmụmaatụ. Anyị ga -agba mbọ hụ na mgbe anyị na -eme nke a, etinyela akpa ahụ n'ime chaja yana ọkụ ọkwa nọ na -eche ihu ma emechie mkpuchi ya. Ìhè ọkwa nke ikpe ahụ ga -egosi ọnọdụ ụgwọ, ka anyị wee nwee ike ịhụ n'ụzọ dị mfe mgbe ebubo ha zuru ezu. A na -eji otu agba ndị anyị kwurula na mbụ na nke a.
Ụzọ ọzọ iji kwụọ ụgwọ ahụ bụ iji eriri. Enwere ike ijikọ ikpe a site na iji eriri ọkụ agụnyere na AirPods na njikọta Lightning na ikpe ahụ. Ọ ga-ekwe omume iji eriri USB-C ruo Lightning ma ọ bụ USB na eriri njikọ njikọ ọkụ. A ga -enwe ike gbaa akwụkwọ ahụ n'adabereghị, yabụ na ọ baghị uru ma ekweisi nọ n'ime ya ma ọ bụ na ọ nweghị. Nchaji a na -adịkarị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na anyị ejiri chaja USB iPhone ma ọ bụ iPad ma ọ bụ ọ bụrụ na ijikọ ha na Mac, dịka ọmụmaatụ.
Kachasị ibu ọrụ bụ ọrụ nwere ike ịmasị anyị. Emebere ụgwọ batrị a kachasị mma iji belata nchapu na batrị AirPods Pro. meziwanye ndụ ya site na ibelata oge na a na -ebufe ekweisi n'uju. Igwe isi na ngwaọrụ iOS ma ọ bụ iPadOS a na -ekwu ga -amụta usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị nke ị na -eji, yabụ ha ga -echere ịkwụ ụgwọ ekweisi karịrị 80% obere oge tupu ịchọrọ ha.
Enwere ike rụọ ọrụ a ma ọ bụrụ na ịnwe AirPods Proyana iPhone, iPod touch, ma ọ bụ iPad. A na -arụ ọrụ a na ndabara n'ime ha, n'agbanyeghị na enyere ya ohere imebi ya ma ọ bụrụ na echee na ọ naghị enye arụmọrụ a tụrụ anya ya maka ekweisi. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji mee ka batrị na -adị ogologo oge dịka ụbọchị mbụ n'ime ekweisi ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi ahụ batrị nke AirPods